Otu esi enweta blọọgụ WordPress gị site na mkpado na Template Mgbasa Ozi Gị | Martech Zone
Anyị na-arụ ọrụ na-ebuli ụfọdụ njem email maka onye ahịa na-akwalite ọtụtụ ụdị ngwaahịa na ha WordPress saịtị. Nke ọ bụla n'ime ActiveCampaign ndebiri email anyị na-ewu bụ ahaziri nke ukwuu maka ngwaahịa ọ na-akwalite yana inye ọdịnaya na ya.
Kama idegharị ọtụtụ ọdịnaya emepụtara nke ọma na nke edobere na saịtị WordPress, anyị jikọtara blọọgụ ha n'ime ndebiri email ha. Agbanyeghị, blọọgụ ha gụnyere ọtụtụ ngwaahịa, yabụ anyị ga-enyocha ndepụta nri maka ndebiri nke ọ bụla site na ijikọ posts blọgụ nke ngwaahịa ahụ nwere akara.
Nke a na-arụtụ aka na mkpa nke ịkpado akụkọ gị! Site n'ịkpado akụkọ gị, ọ na-adị mfe ịjụ ajụjụ na itinye ọdịnaya gị na nyiwe ndị ọzọ dị ka email.
Nri mkpado WordPress gị
Ọ bụrụ na ịmabeghị ya, WordPress nwere sistemụ nri siri ike nke ukwuu. Ị nwere ike iche na saịtị gị nwere oke na naanị ndepụta blọgụ gị nke otu. Ọ bụghị… ị nwere ike ịmepụta ụdị dabere ma ọ bụ ọbụna ndepụta mkpado dabere na saịtị gị. Onye ahịa anyị na ihe atụ a bụ Ọdụ Royal, na ndebiri abụọ emepụtara bụ maka Ngwurugwu Na-ekpo ọkụ na maka Ụgbọ mmiri na-ese n'elu mmiri.
Ejighị ụdị ngwaahịa ahazi posts blọọgụ ha, yabụ anyị jiri mkpado kama. Ụzọ permalink maka ịnweta ndepụta gị bụ blọgụ URL gị na mkpado slug na mkpado gị n'ezie. Yabụ, maka Royal Spa:
Akpadoro akụkọ Royal Spa maka ebe a na-ekpo ọkụ: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/
Akpadoro akụkọ Royal Spa maka ụgbọ mmiri float: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/
Iji nweta Syndication n'ezie dị mfe (RSS) ndepụta Maka nke ọ bụla n'ime ndị ahụ, ị ​​nwere ike tinye naanị / tinye na URL:
Nri blọgụ Royal Spa: https://www.royalspa.com/blog/nri/
Akpadoro akụkọ Royal Spa maka ebe a na-ekpo ọkụ: https://www.royalspa.com/blog/tag/hot-tubs/nri/
Akpadoro akụkọ Royal Spa maka ụgbọ mmiri float: https://www.royalspa.com/blog/tag/float-tank/nri/
Ị nwekwara ike ime nke a site na querystring:
Nri blọgụ Royal Spa: https://www.royalspa.com/blog/?nri =rss2
Akpadoro akụkọ Royal Spa maka tubs na-ekpo ọkụ: https://www.royalspa.com/blog/?tag=hot-tubs&feed=rss2
Edemede akụkọ Royal Spa maka ụgbọ mmiri float: https://www.royalspa.com/blog/?tag=float-tank&feed=rss2
Ị nwere ike jụọ ọtụtụ mkpado otu a:
Edemede akụkọ Royal Spa maka ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ: https://www.royalspa.com/blog/?tag=ụgbọ mmiri na-ese n’elu mmiri, ebe a na-ekpo ọkụ&feed=rss2
Ọ bụrụ na ị na-eji edemede, ị nwere ike iji ụdị slugs (gụnyere subcategory) yana mkpado… nke a bụ ọmụmaatụ:
Ị nwere ike ịhụ ihe kpatara nke a ji baa uru ka ị na-atụgharị ọdịnaya maka usoro ndị ọzọ. Anyị na-agba ndị ahịa anyị niile ume ka ha tinye akụkọ ha na akwụkwọ akụkọ ha, ozi-e nkwado na ọbụna ozi-e azụmahịa ha. Ọdịnaya agbakwunyere nwere ike ime ka email ha baa ụba, nwee ọtụtụ uru:
Ụfọdụ ndị na-eweta igbe ozi algọridim ntinye igbe mbata nwee ekele maka ọdịnaya ederede karịa na ozi-e.
Edemede ndị ọzọ dabara na isiokwu a, ntinye aka na-abawanye na ndị debanyere aha gị.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị eduzi ndị debanyere aha gị na oku na-eme ihe na ebumnuche bụ isi nke email gị, ọ nwere ike ịnye uru ọzọ na belata ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị.
Ị tinyere ego na ọdịnaya ahụ, yabụ gịnị ma ị chegharịa ya mụbaa nloghachi ya na ntinye ego?
Tinye nri RSS ka ọ bụrụ mkpọsa arụ ọrụ
Na ActiveCampaign, ọ dị mfe ịgbakwunye ndepụta RSS:
Mepee mkpọsa Active wee gaa na Mgbasa ozi > Jikwaa ndebiri.
Mepee ndebiri dị (site na ịpị ya), Bubata Template, ma ọ bụ pịa Mepụta Template.
Otu menu aka nri, họrọ Fanye > Ihe mgbochi > Nri RSS.
Nke a mepee Onye nrụpụta nri RSS mpio ebe ị nwere ike itinye adreesị ndepụta gị wee hụchalụ ndepụta:
Hazie gị RSS Feed. N'okwu a, achọrọ m naanị aha njikọ dị mfe yana nkọwa dị nkenke:
Ga-ahụ ugbu a Tinye n'ụdị email gị, ebe ị nwere ike gbanwee okirikiri nhọrọ ukwuu ka ịchọrọ.
Akụkụ kachasị mma na usoro a bụ na ọ dịghị mkpa ugbu a imelite ọdịnaya ugboro ugboro na ozi-e na njem ka ị na-aga n'ihu na-ebipụta ọdịnaya ọhụrụ na blọọgụ gị.
Ngosi: Abụ m mmekọ ActiveCampaign na ụlọ ọrụ m na-enyere ndị ahịa aka inwe ọganihu WordPress mmepe, integrations, na ahịa akpaaka atụmatụ na igbu. Kpọtụrụ anyị na Highbridge.
Tags: ActiveCampaignmkpado blọgụndepụta ndepụtandepụta omenalaemail Marketingndepụtan'ezie nanị syndicationspa ezeRSSrss nrirss feed onye nrụpụtarss ka emailụkọndepụta nriịkpadoWordPresswordpress ndepụtandepụta mkpado wordpress
UPS API njedebe na Nlereanya PHP ule koodu